कुन खानेकुरा कति समय र कसरी पकाउने ? « Kakharaa
कुन खानेकुरा कति समय र कसरी पकाउने ?
गलत खानपान वा खानपान शैली र निस्क्रिय रहँदा खानेकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ । यसले अपच, ग्याष्ट्रिक एवं एसिडिटीको समस्या निम्त्याउँछ । भनिन्छ नि, खाना खाने तरिका सही भएन भने त्यो विकार बन्छ । यदि सही ढंगले सही मात्रामा खान जानियो भने ओखती समान हुन्छ । त्यसैले खाना पकाउने र खाने क्रममा केही सावधानी अपनाइयो भने पेटको विकारबाट छुटकारा पाइन्छ । हामीले दिनहुँ खाने कतिपय खानेकुरा पनि एसिडिटीको कारण बन्न सक्छ । खासगरी ति खानेकुरा पकाउने तरिका नमिल्दा वा त्यसमा मिश्रण गरिने परिकारले पनि एसिडिटी समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
राजमामा प्रसस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । यसमा तरकारीमा फाइ्बर तथा एन्टीअक्सिडेन्ट पनि उत्तिकै हुन्छ । कलेजोका बिरामीका लागि अति नै उपयोगी राजमा स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक छ । तर, राजमाले कतिपयलाई एसिडिटी पनि भैरहेको हुन्छ । राजमा वा सिमीले एसिडिटी हुन्छ भने अघिल्लो रात नै यसलाई भिजाएर राख्नुपर्छ । यसरी पकाइएको राजमा सजिलै पच्छ र यसले एसिडिटी हुन दिँदैन ।
कहिले काहीँ त्यही फलफूल पनि एसिडिटीका कारण बनिदिन्छ । कतिपय फलफूलमा सुगरको मात्र अत्यधिक हुने भएकाले पनि त्यस्ता फलफूल खाँदा हामीलाई एसिडिटी हुन सक्छ । त्यसैले स्याउ, अंगुर, केरा जस्ता सुगर बढि पाइने फलफूल एकै पटक धेरै मात्रामा खानु हुँदैन ।